Akụkọ - Polyester Fibers emegharịrị
Polyester bụ eriri ejiri aka mee, nke arụpụtara site na ngwaahịa akpọrọ polymerization. Site na 49% nke mmepụta eriri ụwa, polyester bụ eriri kachasị eji eme ihe na mpaghara akwa, na-emepụta kwa afọ karịa 63,000 nde tọn nke eriri polyester. Usoro eji eme ihe maka imegharị ihe nwere ike ịbụ igwe ọrụ ma ọ bụ kemịkalụ, site na nri na-eri nri nke nwere ma ọ bụ ihe eji eme ihe n'azụ ahịa nke enweghị ike iji ya maka ebumnuche ya. A na-eji PET eji eme ihe dị ka ihe eji emegharị polyester. A na-ejikwa ihe a eme ihe na karama mmiri mmiri plastik, ma weghachite ya iji ruo akwa ahụ na-egbochi ya ịga na-ekpofu ahịhịa. Uwe ndị e mepụtara site na polyester emegharị emegharị nwere ike ịmegharị ugboro ugboro na enweghị mmebi nke ịdị mma, na-ahapụ iwelata mmebi, nke pụtara na onye na-emepụta uwe nwere ike bụrụ sistemụ mechiri emechi, enwere ike iji polyester mee ihe ruo mgbe ebighi ebi.
Azụmaahịa Polyester Fibers Recycled zuru ụwa ọnụ na-elekwasị anya na ị gụnyere nnukwu ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ maka ụlọ ọrụ Polyester Fibers Recycled dị ka ọ na-enye ndị na-agụ akwụkwọ anyị mgbakwunye mgbakwunye na iduzi ha n'inweta ihe mgbochi ndị gbara ahịa ahụ gburugburu. Mgbakwunye zuru oke nke ọtụtụ ihe dịka nkesa ụwa, ndị nrụpụta, oke ahịa, na ahịa ahịa nke metụtara onyinye ụwa na-akọ na ọmụmụ ihe ahụ. Na mgbakwunye na nyocha nke Polyester Fibers a na-emegharị emegharị na-atụgharịkwa uche ya na mbara ala asọmpi miri emi, kọwaa ohere mmepe, òkè ahịa yana ụdị ngwaahịa na ngwa, ụlọ ọrụ ndị isi maka nrụpụta, yana usoro eji eme ihe.